Dhalinyaro Al-shabaab kasoo goostay oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dhalinyaro Al-shabaab kasoo goostay oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda (DHAGEYSO)
Labo ka mid ah dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa la sheegayaa inay shalay isku soo dhiibeen ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Laanta Buuro ee duuleedka degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose.
Dhalinyaradaasi oo da’dooda lagu qiyaasay inta u dhaxeeysa 20 illaa 24 jir ayaa la sheegayaa inay kasoo goosteen dagaalyahanadda Al-shabaab ee ku sugan deegaanka Gandershe oo qiyaastii 15-km u jirta magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose.
Wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/rashiid C/laahi Maxamed ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dhalinyaradaasi Shabaabka ka tirsan ay haatan gacanta ugu jiraan dowladda Soomaaliya.
Wuxuu, wasiirka sheegay in maalmihii ugu dambeysay ay sidoo kale jireen dhalinyaro badan oo ka tirsanaa Al-shabaab ee isku soo dhiibayay ciidamada xoogga dalka ee ku kala sugan gobolada Hiiraan, Bay iyo Sh/hoose.
Tirada dhalinayaradaasi ayuu sheegay inay gaarayaan in ka badan 50 dhalinyaro, kuwaas oo uu sheegay in loo sameyn doonno dhaqan-celin wanaagsan.